🥇 ▷ Samsung wuxuu ku majaajiloodaa iPhone 6 Plus fiidiyowga Xusuusta 4 ✅
Samsung wuxuu ku majaajiloodaa iPhone 6 Plus fiidiyowga Xusuusta 4
Fiidiyoow xayeysiis ah ee Note 4 ayaa weeraraya iPhone 6 Plus cusub
Samsung mar kale ayay sameysay. Shirkadda South Korea ayaa daabacday muuqaal cusub oo ay ku qosleyso Apple, markan wuxuu isku dayaa inuu si qosol leh ugu qoslo iPhone 6 Plus, wajiga koowaad ee shirkadda Cupertino. Fiidiyowga waxaan ku arki karnaa sida Samsung ay raadineyso inay kor u qaaddo Ogeysiiska 4 oo ay ku jees jeesto iPhone 6 Plus ee Apple.
Gaar ah fiidiyowgu wuxuu diiradda saarayaa dhammaan dib u eegista Qoraalka asalka ah markii la soo bandhigay. Waqtigaas taleefan casriga ah oo leh shaashad ah 5.3 inji waxay ahayd caqli gal dhab ah waxaana jiray dib u eegisyo badan oo xun oo uu helay.
Hadda waqtigii wuu dhammaaday oo suuqduna waxay aqbashay shaashado waaweyn. Waxaa jira waxsoosaarayaal badan oo go aansaday inay wax ka dhigaan arintaan waqti ka hor hadana hada waa kan Apple.
Samsung ayaa sidoo kale ku jees jeesa “qalabka xadidan” ee iPhone 6 cusub
Samsung sidoo kale ka faa iidayso faallooyinka xiisaha leh ee lagu daadiyay Twitter-ka iyo shabakadaha kale ee bulshada ee ku saabsan iPhone 6 Plus iyo qalabkiisa. Dhamaanteen waan ognahay in Apple Waxay u isticmaashaa qalabka ugu badan sidaa daraadeed uma baahna tirooyin u sarreeya sida soosaareyaasha kale si ay u gaaraan waxqabad la mid ah ama mid sarreeya (sideed qaybood oo muhiim ah, dhowr GB oo RAM ah). Apple waxay awood u leedahay inay sidaas oo kale sameyso qalabka badan oo ka kooban qalabka taasna waxay mudan tahay in la ixtiraamo, in kasta oo loogu talagalay Samsung waxay umuuqataa inay tahay ujeedo ku jees jees ah sidaas darteedna waxay u siiyeen inay ku arkaan fiidiyoogooda cusub.
Maaha markii ugu horraysay ee ay Samsung samayso muuqaal nooca noocan ah isla markaana ay hadda tahay Apple Waxay gashay qayb ay Samsung leedahay faa iidooyin badan, waxaan hubnaa inay jiri doonaan fiidiyowyo badan oo noocaan ah, sida ay sheegeen iPhoneitalia .
Sidee ku saabsan? Ma u malaynaysaa in Samsung ay runtii ku habboon tahay inay ku qoslaan Apple taleefannadooda casriga ah? Miyuu iPhone 6 Plus runtii ku xidhan yahay? Xusuusin 4 ama ma u malaynaysaa in looga tagay?